Diamond Akaona mashizha
Kukuya & Kucheka Mavhiri
Carbide Michina Inobhururuka
Yang Quanlu akakokwa kuenda kumusangano we "new think tank + intellectual property kukurudzira kusimudzira kwepamusoro kwemaindasitiri" uye akaita hurukuro
ne admin pane 20-04-10
Musi waNdira 3, 2020, Yang Quanlu, sachigaro wequangong Tools Co, Ltd., akakokwa kutora chikamu mumusangano we "nyowani yekufunga tangi + yezvivakwa kusimudzira kusimudzira kwepamusoro kwemaindasitiri" yakaitirwa muBeijing People's mazuva ese. Yakagadzirirwa naTao liming, mupepeti mune mukuru o ...
2020, ngatirambei tichitevera zviroto zvedu, tisatomborasa nguva yedu!
ne admin pane 20-04-09
Mumazuva achangopfuura, novel coronavirus pneumonia yakanganisa moyo yerudzi rwese. Munguva yakaoma yekurwa nedenda, basa rese rakapindura kudana kwehurumende, uye pasi pehutungamiriri hwevatungamiriri vekambani, vakatora matanho ndokuenda vese ...
Tsamba yekurumbidza kuna Guo refu, iro Ministry rezvekuchengetedza uye nharaunda
ne admin pane 20-04-07
Munguva yakaoma nguva yemabayo inokonzerwa nerudzi rwecoronavirus, kambani yedu yakaratidza kushingairira kudanirwa nehurumende, zvakanyatso kumisa kupararira kwechirwere ichi nekuona kuti denda rinorwisa uye denda basa rakabudirira kukunda kukuru. Epidemic situatio ...
Batanai semunhu mumwe kurwisa "denda"
Iine nyowani nyowani coronavirus pneumonia denda rekudzivirira uye basa rekudzora rakapinda padanho rakakomba, mushandi wese anotarisisa zvakanyanya kudenda rekudzivirira uye rekudzora basa. Yang Zhanfei, maneja mukuru wekambani, akaronga misangano yakati wandei online kuronga kuendeswa kwe ...
Ndinokutendai musangano wakaitwa zvinobudirira
Musi waNdira 18, Nanhe Hotel odhitoriyamu yakashongedzwa nemwenje, uye vanopfuura vashandi zana, kusanganisira hutungamiriri hwese, vamwe vatengesi uye mamodheru akanakisa, vakaungana muhoro yekufara. Kurumbidza kwekupera kwegore kwe2019 uye manheru ekutenda kwevashandi akaiswa pano. Na 17:00 pm, iyo pa ...
Quangong Zvishandiso Co., Ltd. Inotora chikamu muChina Kunze uye Export Fair
Chikamu chekutanga cheChina Kunze uye Export Fair (Canton Fair) mu2019 yakauya panguva. Zviuru zvemaindasitiri hofori uye akakurumbira mabhurani mune zvishandiso zvehardware, michina, zvikamu zvemotokari, zvekuvakisa uye maindasitiri emwenje akaungana pano. Quangong Zvishandiso Co., Ltd.iri munzvimbo C yemahara ...
Quangong Tools Co., Ltd. vakapinda Shanghai Cologne International Hardware Exhibition
Kuti ikurudzire kukurumidza kukura kwebhizinesi rebhizinesi, kambani yakapinda mu2019 Shanghai Cologne International Hardware Exhibition kubva muna Gumiguru kusvika Gumiguru 12, nevatengi vanopfuura makumi matatu vatsva nevakuru uye mutero unopfuura mamirioni mashanu yuan. Kubva Gumiguru 10 kusvika Gumiguru 1 ...
Hebei quangong imupota uye ekisipoti kutengeserana Co., Ltd.